AppImageLauncher - Mandrosoa mora foana ary ampidiro ao anaty Appimage | Avy amin'ny Linux
Ny sasany lasa izay eo amin'ny tontolon'ny Gnu / Linux dia manana fomba iraisan'ny rehetra hametrahana fampiharana izahay na inona na inona fizarana apetraka ary ity fomba ity dia amin'ny fanangonana ny rindranasa avy amin'ny kaody loharano niavian'izany.
Ity fomba ity dia mbola ampiasaina, dia somary tara ihanyHo fanampin'izay ho an'ireo mpampiasa vaovao amin'ny Linux ary na ireo mpampiasa manelanelana aza, ny asan'ity dia mety ho somary sarotra ihany.
Efa voafaritra kely kokoa ny ankamaroan'ny fizarana dia mampiasa mpitantana fonosana sasany Manohana azy ireo amin'ny fametrahana fampiharana izy ireo, lazao ohatra ny Debian na Ubuntu miaraka amin'ny fonosana apt sy deb na Fedora misy fonosana yum sy rpm.
Izay efa ahitantsika ireo rindranasa amin'ireo endrika fonosana malaza indrindra ary mamonjy fotoana betsaka amin'ny fametrahana azy ireo izahay satria tsy mila manangona izany ao amin'ny rafitray.
lasa izay tsy ela dia nanomboka nipoitra ny karazana fonosana vaovao hametraka rindranasa, ohatra, Snap, Appimage na Flatpak.
Raha ny tena manintona ny sasany amin'ireny dia ny fihazakazak'izy ireo ao anaty tontolo iray tafasaraka tanteraka amin'ilay rafitra, izay tsy hananantsika olana amin'ny fanimbana ny rafitra na fandefasana izany.
1 Momba ny AppImageLauncher
1.1 Ahoana ny fiasan'ny AppImageLauncher?
1.1.1 Mihazakazaha indray mandeha na Ampidiro ary mihazakazaha.
1.1.2 Fafao na havaozy ny fampiharana.
2 Ahoana ny fametrahana AppImageLauncher amin'ny Linux?
Momba ny AppImageLauncher
Ity indray mitoraka ity hifantoka amin'ny fonosana amin'ny endrika AppImage izahay izay na ny mpampiasa maro aza tsy mahalala ny fametrahana azy ireo ary na ny fampidirana azy ireo ao amin'ny rafitray aza.
Rehefa misintona fonosana AppImage izahay hametrahana azy dia tsy maintsy manome alalana hametraka azy isika ary hanatanteraka ity baiko manaraka ity hametrahana azy:
Izay hanamafy fa hametraka ilay rindranasa isika, amin'ny faran'ity dia anontaniana isika raha tianay ny hampidirina ao anaty menio fangatahanay ilay fampiharana na raha te-hamorona hitsin-dàlana izahay.
Aiza ny ankamaroan'ny mpampiasa no miteny hoe tsia nefa tsy fantany na tsy nahy. Raha te hampandeha ilay rindranasa aty aoriana dia tsy maintsy ataontsika amin'ny rakitra izay alaina izany.
fa Manana fitaovana afaka manamora izany koa izahay, antsoina hoe fitaovana ity AppImageLauncher.
Ny fampiharana mamela anao hihazakazaka mora foana ny fisie AppImage, nefa tsy mila hampandeha azy intsony.
AppImageLauncher izao Manana ny fanohanany ho an'ny Ubuntu, Linux Mint, Debian, Netrunner fotsiny izy ary nanampy fanampiana ho an'ny openSUSE tato ho ato.
Fa ny endri-javatra mahaliana indrindra dia ny mampifangaro mora foana ny AppImages miaraka amin'ny rafitrao: AppImageLauncher dia afaka manampy lalan-kely ho an'ny fampiharana AppImage amin'ny mpandefa menio / fampiharana eo amin'ny tontolon'ny birao misy anao (ao anatin'izany ny kisary fampiharana sy ny famaritana mety).
Ahoana ny fiasan'ny AppImageLauncher?
rehefa Misintona rindrambaiko amin'ny appimage izahay, tsindrio indroa fotsiny eo aminy handefasana AppImageLauncher ary izany dia hanolotra safidy maromaro ho antsika.
Ireto aloha no hatolotra anao rehefa hametraka ny fangatahana voalohany ianao dia:
Mihazakazaha indray mandeha na Ampidiro ary mihazakazaha.
Ny fipihana mampifangaro sy mihazakazaka, ny fampiharana ao amin'ny AppImage dia adika amin'ny folder ~ /.bin / ary ampidirina ao amin'ny menio, avy eo natomboka ny fampiharana.
Ireo safidy hafa atolotray anao rehefa efa apetraka ny rindranasa dia:
Fafao na havaozy ny fampiharana.
Raha te hanafoana ilay rindranasa izahay dia tsotra ihany, raha toa ka mifanaraka amin'ny hetsi-birao ny tontolon'ny birao ampiasanao.
Raha hanavao anao dia tokony haseho anao ny safidy rehefa mihazakazaka ianao AppImageLauncher indray amin'ny appimage nohavaozina ny fampiharana izay efa napetrakao amin'ny rafitra.
Ohatra, ao amin'ny Gnome Shell, kitiho fotsiny ny kisary fampiharana ao amin'ny topi-maso Aktiva ary safidio ny Esory amin'ny System:
Ahoana ny fametrahana AppImageLauncher amin'ny Linux?
Araka ny nolazaiko ny fampifanarahana ny AppImageLauncher, na dia azo ampiasaina amin'ny derivatives aza izy io, dia tsy maintsy jerentsika fa miankina amin'ny tontolon'ny birao izay misy ny Gnome Shell na kanelina no mety indrindra.
ihany tsy maintsy mandeha amin'ity rohy manaraka ity ianao y ampidino ny fonosana ho fizarana anao Linux.
Raha ny momba an'i Debian, Ubuntu ary ny derivatives, raha hametraka azy isika dia tsy maintsy mametraka ny tenantsika ao anaty fampirimana izay nampidinana sy namono ilay fonosana:
Raha ho an'ny Ubuntu 18.04 manokana dia manana fonosana izahay:
Ho an'ny openSUSE:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » AppImageLauncher: mandefa sy mampiditra fampiharana mora foana ao amin'ny Appimage
Mieritrereta dia hoy izy:
Manome ny lesoka: ny lesoka eo am-pamoahana ireo tranomboky zaraina: libQt5DBus.so.5: tsy afaka manokatra rakitra zaraina: tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany
Tokony holazain'izy ireo aminao hoe inona ny fiankinan-doha ananany na avy aiza no anaovana ny fampidinana azy mba hahafahany manao ny zava-drehetra samirery, ilay toerana * niteraka anao arivo.
Mamaly an'i Denk
Tsy azo atao ny mampandre anao ny fiankinan-doha rehetra ilain'ny programa tsirairay
Trotanplay dia hoy izy:
Azon'izy ireo aseho ny fomba fanaovana azy amin'ny antix linux, mampiasa icewm ary hitako fa somary sarotra izany, azafady.
Mamaly an'i Trotanplay
Ahoana ny fametrahana mpizara hafatra miaraka amin'i Gammu - Fizarana 1